My World: November 2009
Posted by PhyoPhyo at Monday, November 30, 2009 Labels: နံရံဆေးခြယ်အနုပညာ သို့မဟုတ် Graffiti Art, ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး
(စာအဟောင်းပါပဲ၊ အဟောင်းတွေပဲ ပြန်ပြန်ကောက်တင်နေရတယ်၊ အသစ် မရေးနိုင်သေးလို့ပါ)
ဘဲလ်ဂရိတ် က Graffiti art တွေအကြောင်းရေးပါဦးမယ်၊ အချက်အလက်စုလိုက်ဦးမယ်
လူငယ်ထုရဲ့ ဂီတနဲ့ Graffiti
“Graffiti ဟာ စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ idea ကို skill မပါဘဲ လက်တန်းလုပ်ရတော့ မှုတ်ဆေးဘူးကိုင်တာ ကျွမ်းကျင်ရမယ်။ ‘ပြိုင်ဘက်’ ဗီစီဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး စသုံးခဲ့တယ်။ ဖန်တီးသူကတော့ Cyclone အဖွဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သုတအေး ပါ” လို့ Hip-Hop သမား တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ `ဘာဘူ´ ကပြောဖူးပါတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, November 24, 2009 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး, မိသားစုဆိုတာ ဘုရားကျောင်းလေးတစ်ခုပါ
မိသားစုဆိုတာဘုရားကျောင်းလေးတစ်ခုပါ လို့ ဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ ဆားဘီးယန်းအော်သိုဒေါစ့်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းချုပ် ပါဗလဲ ဟာ ထာဝရဘုရားရဲ့ အိမ်တော်မှာ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့က အိပ်စက်သွားခဲ့ပါပြီ။ အသက်ထင်ရှားရှိစဉ်က လူတွေကြားထဲ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်သွားလာခဲ့ဖူးခြင်းမရှိတဲ့ ပါဗလဲ ရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနား မှာ ပါဗလဲကိုရိုသေချစ်ခင်ကြတဲ့ လူပေါင်း ၆သိန်းကျော်လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ ၃ ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဈာပန အခမ်အနားမှာ ဆားဘီးယား၊ မွန်တန်နီဂရိုး၊ ဘောစ့်စနီးယား ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ ခရိုးအေးရှား၊ နဲ့ အနီးပါတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံဆီက ပါဗလဲကိုချစ်တဲ့၊ ပါဗလဲက အမြဲချစ်ခင်ခဲ့တဲ့ သူတွေ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ကို စုရုံးရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းချုပ် ပါဗလဲ ဟာ ဘာသာရေးအသိအမြင်ကြွယ်ဝသူ၊ သနားကြင်နာမှုအပြည့်ရှိသူ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားသူ၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနေထိုင်တတ်ပြီး ပွင့်လင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးအသိအမြင်ရှိသူဖြစ်တယ် လို့ စာစောင်အသီးသီး ကရေးသားခဲ့ကြတယ်၊ ဘဲလ်ဂရိတ်သတင်းဌာနတွေမှာလဲ ပါဗလဲ ရဲ ဘ၀၊ ပါဗလဲ ရဲ့ အယူအဆ၊ သဘောတရား စကားလုံးတွေကို တချိန်လုံးလွှင့်ထုတ်ပြသခဲ့ကြတယ်။ ကလေးငယ်တွေကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်သူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ သနားကြင်နာမှုကို အမြဲပြသလေ့ရှိတယ်၊ ကိုဆိုဗိုပြည်တွင်းစစ်ပွဲအတွင်း ဘုန်းကြီးတွေကို သရဲတစ္စေတွေအလား ပြောင်လှောင်နေကြတဲ့ အချိန်ကာလမှာ၊ ကိုဆိုဗိုကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ ပါဗလဲဟာလဲ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ပြောင်လှောင်မှု၊ လူကြီးတွေရဲ့ မလိုမုန်းထားရန်လိုမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်၊ တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာ လက်ခံခဲ့တယ်၊ ကလေးငယ်တွေရဲ့ပြောင်လှောင်မှုကို သကြားလုံးတွေပေးဝေရင်း တခဏတာငြိမ်သက်အေးချမ်းစေခဲ့တယ်။ ကလေးငယ်တွေ ငြိမ်သက်နေစဉ်အချိန်အတွင်း အဖြူရောင်ကလေးငယ်တွေကိုကြည့်ရင်း သူ အင်မတန်ပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်။ လူကြီးတွေရဲ့ အမုန်းတရား၊ တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးလိုတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးဝိညာဉ်တွေကို ငြိမ်ချမ်းအေးဆေးသွားစေလိုခဲ့တယ်။ ဘဲလ်ကန်လူမျိုးစုစစ်ပွဲတွေအတွင်းနဲ့ အသက်ရှင်နေစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တတ်စွမ်းသလောက်ကြိုးပမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါလ်ကို တွေ့ဆုံသွားလိုတဲ့ဆန္ဒအမြဲရှိနေခဲ့ပေမဲ့ တသီးတခြားနေလိုတဲ့ အော်သိုဒေါစ့်ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ အယူအဆကြောင့် သူ့ရဲ ဆန္ဒ မပြည့်ခဲ့ရှာပါဘူး၊ ပါဗလဲငယ်ရွယ်စဉ် ဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာ ဧည့်သည်အဖြစ်ရောက်ရှိစဉ်က ခေတ္တနေထိုင်ခဲ့တဲ့အခန်းတွင်း မီးလုံးကိုဖြုတ်ကာ သူ ယူဆောင်လာခဲ့တဲ့ ဗို့အားအလွန်နည်းပါးတဲ့ မီးသီးကို ပြောင်းလဲတပ်လို့ မိမိအတွက်ဝန်ကို တတ်စွမ်းသမျှချွေတာစေခဲ့သူမျိုး ဖြစ်တယ်၊
စိတ်နှလုံးနူးညံ့သူ၊ ၀ိညာဉ်တော်ဖြူစင်သန့်ရှင်းသူ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းချုပ်ပါဗလဲ ကို လေးစားချစ်ခင်မိတာကြောင့် ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အချိန်တိုအတွင်း လက်လမ်းမှီသလောက်ရှာဖွေ၊ မေးမြန်းရေးသားလိုက်ရတာကြောင့် လိုအပ်တာတွေရှိနေဦးမယ်ဆိုတာ ကြိုတင်ဝန်ခံထားပါရစေ၊ ပါဗလဲရဲ့ စကားတွေ၊ ပါဗလဲကိုချစ်ခင်တဲ့ သိက္ခာတော်ရဆရာ၊ ဂိုဏ်းချုပ်တွေရဲ့ ပြောစကားတွေ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်၊ မီဒီယာတွေက ဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့ ပါဗလဲရဲ့ဘ၀ဇတ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေ အကုန်မဖော်ပြနိုင်လိုက်ပါဘူး၊ လိုအပ်ချက်တွေအတွက် ဒီပိုစ့်ကို ရေးသားသူရဲ့ တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Sunday, November 08, 2009 Labels: အက်ဆေး, နှင်းကျတဲ့နေ့က ကျွန်မ ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်
နှင်း ဖြူဖြူလေးတွေ ဘယ်တော့ကျလာမှာတဲ့လဲ၊ ဒီလို ခဏခဏ မေးရင်း ခဏခဏတွေးရင်း ရာသီဥတုက ပိုလို့ ပိုလို့အေးလာပါပြီ၊ ကျွန်မနေတဲ့မြို့ဆိုတာက နှင်းမကျတတ်ဘူး၊ နှင်းဖြူဖြူလေးတွေကို ဓါတ်ပုံတွေတဲမှာမြင်ရတိုင်း ကိုင်ကြည့်ချင်တဲ့ စိတ်က တားမနိုင်ဆီးမရ၊
“ကဲ နဲရှောရေ ဘယ်မှာလဲ .. ယူ ပြောတဲ့ နှင်းတွေက.. ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ ကျလာလိမ့်မယ်ဆို၊ နေပူလိုက်၊ လေတိုက်လိုက်၊ မိုးရွာလိုက်နဲ့၊ နှင်းကျရင် နှင်းတွေထဲ လိုက်ပို့ပေးရမယ်နော်” ဒီလိုမျိုးပဲ..
ကျွန်မနေ့တိုင်းလိုလို သူ့ကို ပူဆာနေကျပေါ့ .. နှင်းကတော့ ကျမလာသေးပါဘူး ..
အိပ်ရာကနိုးတိုင်း ပထမဆုံး မျက်လုံးတွေက ပြတင်းတံခါးဝဆီကို ၊ ပြီးတော့ ခန်းဆီးစကို ဆွဲမ၊ ဟင်း .. ဒီနေ့လဲ ကောင်းကင်ဖြူပိန်းပိန်းမှာ အဖြူရောင်သိပ်သိပ်မြူတွေပဲပြည့််လို့၊ ဒီလိုပဲ ဒီလိုပဲ နေ့တွေများလှပီ၊ ဘယ်မှာလဲ နှင်းစက်လေးတွေက၊
မိုးစက်လေးတွေ သေးသေးမွှားမွှား တဖွားဖွားလွင့်လို့၊ လေကလဲ ဟိုကဒီက ဝေ့၀ဲတိုက်ခတ်လို့၊ ပြတင်းပေါက်ဆီက အဖြူ အနီ ပန်းပင်လေးတွေ က လေတွေတိုက်လို့ ခပ်ခါခါ၊
သူ ကပြောတယ် “မပြောနိုင်ဘူး၊ ဒီမိုးစက်သေးသေးလေးတွေက နှင်းမှုန်လေးတွေ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်၊ ဒါ နှင်းစက်လေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်” တဲ့။
ဟာ ဒါနှင်းမှုန်လေးတွေ .. ဘယ်လိုပဲ ကြည့်ကြည့် မိုးဖွဲဖွဲလေးရွာနေတာပါပဲ၊ သူ ကျွန်မစိတ်ကျေနပ်အောင်ပြောတာပဲဖြစ်ရမယ်။
Posted by PhyoPhyo at Sunday, November 08, 2009 Labels: ဘာသာပြန်သီချင်း, သူရဲကောင်းတွေ နဲ့ ဆိုးသွမ်းလှတဲ့သူတွေ
(ဆင်ဆာမိတော့မှာပဲလို့ထင်ထားပေမဲ့ လွတ်သွားတဲ့ သီချင်း၊ သီချင်းဆိုတော့ သူတို့ သေချာမဖတ်ကြလို့ပါ၊ လှိုင်းသစ်မဂ္ဂဇင်းပါပဲ)
The Beach Boys ရဲ့ သီချင်းတွေထဲက ဂီတချစ်ပရိသတ်တွေရဲ့ စာသား အကောင်းမွန်ဆုံး လို့ မဲပေးထားခဲ့ကြတဲ့ "Heros and Villains" သီချင်းက တကယ်ပဲ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ အခုချိန်ထိနားထောင်ကြည့်လိုက်တိုင်း အချိန်တိုင်းမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေဆဲ အနုပညာအားပြင်းတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေတာကြောင့်
"Heros and Villains" သီချင်းကို ရေးသားသီဆိုခဲ့ကြတဲ့ The Beach Boys တွေ အကြောင်းအရင်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပါ။
သူတို့ရဲ့ သီချင်းတွေကရော ဘယ်လိုတွေလဲ ..
The Beach Boysျ တွေက အမေရိကန်ရောခ့်အဖွဲ့ ဖြစ်တယ်။ harmony ဖြစ်လှတဲ့ အဖွဲ့သားတွေရဲ့ အသံလိုင်းပေါင်းစုံကြောင့် နာမည်ကြီးလာခဲ့တယ်။ သူတို့ ဖန်တီးလေ့ရှိတဲ့သီချင်းအမျိုးအစားတွေက rock, surf rock, psychedelic pop, pshchedelic rock, baroque pop တွေပါ။ "Heros and Villains" က Psychedelic Pop အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ Psychedelic Rock, Psychedelic Pop ဆိုတာ ခပ် ကြမ်းကြမ်း အနည်းငယ်ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ရှိတဲ့ သီချင်းမျိုးတွေပါပဲ။ Psychedelic ဟာ ဂရိစကားလုံးဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်အခေါ်အဝေါ် နဲ့ဆိုရင် soul နဲ့ manifest ပေါင်းစပ်ထားတာပါ။ Baroque Pop ကတော့ Bouh Rock လို့လဲခေါ်တဲ့ ၁၉၆ဝခုနှစ်တွေက ခေတ်စားတဲ့ rock music တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ Classical music တွေကို Rock 'n' Roll သီချင်းတွေထဲ အရေးအသားပိုင်းပြောင်း၊ အသံဖမ်းရာမှာလဲ ပြောင်းလဲပြီးပေါင်းထည့်ထားတဲ့ ဂီတမျိုးလို့ဆိုတယ်။
အဖွဲ့သားတွေက ဒရမ် - ဟဲလ်ဘလိန်း၊ ဘေစ့်ဂစ်တာ- ကာရိုလ်ကေး၊ နောက်ခံဘေစ်ဂစ်တာ-လိုင်လီရစ်ထ်ဇ်၊ စန္ဒရား- ဒိုအန်ရမ်ဒီ၊ ဘီလီစထရိန့်ခ်ျ၊ အဆိုနဲ့ ဟာမိုနီ- မိုက်ခ်လပ်ဗ်၊ အဲလ်ဂျာဒိုင်း၊ ကားလ်ဝီလ်ဆင်၊ ဒဲနစ်ဝီလ်ဆင်၊ ဘရုစ်ဂျွန်စတန်၊ နောက်ခံအဆို-လပ်ဗ်တား တို့ဖြစ်ကြတယ်။
"Heros and Villains" ကိုတော့ The Beach Boys အဖွဲ့က ဘရိုင်ယန်ဝီလ်ဆင် နဲ့ ဗန်ဒွိုက်ခ်ပါ့ခ်စ် တို့ အတူတူရေးသားခဲ့ကြတယ်။ ပုံပြင်ထဲက အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရည်ရွယ်ရေးသားခဲ့ကြတာပါ။ ဝီလ်ဆင်ရေးသားခဲ့တဲ့ စာသား "Once at night catillian squared the fight" မှာ စာလုံးပေါင်း catillian ဟာ အမှန်က cotillian ဖြစ်ရမယ်လို့ The Beach Boys ပရိသတ်တွေက်forum တွေမှာ ရေးသားခဲ့ကြတယ်။ ဝီလ်ဆင်ကလဲ သူပြောချင်တာက ခန်းမကျယ်ကြီးမှာ စုပေါင်းကကြတဲ့ ၁၇ဝဝ ခုနှစ်ပိုင်းက ပြင်သစ်အကတစ်မျိုး cotillian ကိုပဲ ရည်ရွယ်တာပါလို့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။ စာသားကိုတော့ မပြောင်းခဲ့ပါဘူး။
၁၉၆၆-၁၉၆၇ ခုနှစ်အတွင်း version အများကြီးနဲ့ ဆိုခဲ့ကြတဲ့ The Beach Boys ရဲ့ သီချင်းဟောင်းဖြစ်နေပေမယ့် ဒီနေ့ထိ ဂီတပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားနေကြဆဲပါပဲ။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ "Heros and Villians" ဟာ ဝီလ်ဆင်ရဲ့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ စန္ဒရားတစ်လုံးထဲနဲ့ ပဲ ရေးစပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုတယ်။ "Heros and Villians" ဟာ ဝီလ်ဆင်နဲ့ ပါ့ခ်စ် တို့ရဲ့ ပထမဆုံးအတူတကွ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့သီချင်းပါ။ ဝီလ်ဆင်က သံစဉ်ကို ပထမရှာပေးခဲ့ပြီး ပါ့ခ်စ်က အဖွင့်စာသားနဲ့ အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာ ဆက်လက်ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။ "Heros and Villains" ထဲမှာပါတဲ့ ဂီတသံစဉ် အမျိုးမျိုးကှိုSMiLE အယ်လ်ဘမ် အတွက် တခြားသီချင်းတွေမှာပါ အပိုင်းလိုက် ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ထည့်သုံးခဲ့တာတွေရှိတယ် ဆိုတာ "Heros and Villians" ရင်းနှီးပြီးသား ပရိသတ်တွေက အသေအချာပြောပြနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဝီလ်ဆင်ကလဲ ငြင်းမနေပါဘူး၊ သူသိပ်ကြိုက်တဲ့ ဂီတအပိုင်းအစတွေ ကြုံရင်ကြုံသလို ထည့်သုံးနေမှာပါပဲ လို့ ပြန်ရှင်းခဲ့ပါတယ်။ Surf's Up နဲ့ Cabinessence သီချင်းတွေရဲ့စာသားတွေ ဟာ The Beach Boys သီချင်းတွေအားလုံးထဲမှာမှ ဝေခွဲမရတဲ့ စာသားအသုံးအနှုန်းရှုပ်ရှုပ်တွေ ဖောဖောသီသီသုံးထားပါသေးတယ်။ "Heros and Villians" စင်ဂဲလ်ကို မူလက Capitol 5826 အမည်နဲ့ စီစဉ်ခဲ့ပြီး အဖုံးဒီဇိုင်း အတွက် အဖွဲ့သား၆ယောက်ရဲ့ပုံ အဖြူရောင်ပန်းချီကားနဲ့ ပြုလုပ်ထားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘရိုင်ယန်ဝီလ်ဆင်က သူ့စိတ်ကူးထဲမှာဖန်တီးချင်တဲ့အတိုင်း ပြောင်းပစ်လိုက်တယ်။ Capitol 5826 စင်ဂဲလ် ကတော့ မထုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ၂ဝဝ၄ခုနှစ်မှာတော့ "Heros and Villains" ကို ပြန်လည် အသံဖမ်းခဲ့ပြီှးSMiLE ရဲ့ version အသစ်မှာ ပြန်ထည့်ထားတာပါတယ်။
The Beach Boys တွေပြောတဲ့ သူရဲကောင်းတွေနဲ့ လူဆိုးလူညစ်တွေက ဘယ်သူတွေလဲ သိရအောင် "Heros and Villains" သီချင်း စာသားကိုဖတ်ကြည့်မိတဲ့ အခါ +++
ကျွန်တော်တော့ ဒီမြို့လေးမှာ ရှင်သန်နေထိုင်လာခဲ့တာ မြို့ တော်ကြီးက ပြန်လာခဲ့ပြီးကတည်းဆိုတော့ ကြာလှပြီပေါ့ ..
ကျွန်တော့်ဆီကထွက်ပြေးကုန်တဲ့ အရာတွေ၊ ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲအရာတွေ၊ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိတဲ့အရာတွေ ကို ရယူဖို့
ဒီမှာပဲ အချိန်တွေ အများကြီး ကြာမြင့်အောင်နေခဲ့ပြီးပါပြီ ..
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပဲ သူရဲကောင်းတွေ ၊ လူဆိုးလူညစ်တွေရဲ့ မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ စပိန်နဲ့ အင်ဒီးယန်း ဒေသက
အပြစ်ဆိုတာမသိ၊ အပြစ်ဆိုတာမရှိလေတဲ့ ရိုးရိုးသားသား မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လဲ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြီ ..
တကြိမ် ခန်းမကျယ်ကြီးထဲက ကက်တီလီယန်အကပိုင်ရှင်တွေဆီ တိုက်ခိုက်မှုကြုံရစဉ် ညမည်းမည်းထဲ ၊
မိန်းကလေး ++ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖြူထည်မိန်းကလေး ဟာ ကျည်ဆန်မိုးတွေ ခပ်သဲသဲဖြာကျနေတဲ့နေရာမှာမှ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ကြီးရောက်နေခဲ့သေးတော့၊
အဆုံးမှာ အဲဒီ သဲသဲမဲမဲ အရာတွေက မိန်းကလေးကို လဲကျစေခဲ့ပြီ ..
ဒါပေမဲ့ မိန်းကလေးက သူ့ရဲ့ကကြိုးကိုတော့ မပျက်စေခဲ့ပါဘူး ..
သူရဲကောင်းတွေ၊ လူဆိုးတွေ ပြည့်နှက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဒီမြို့ကလေးမှာ ဒီမြို့ကြီး သူလေးတစ်ယောက်ကိုပဲ မကြောက်မရွံ့ရင်ဆိုင်စေမှာတဲ့လား ..
ကဲ - သူရဲကောင်းတွေ ၊ လူဆိုးကြီးတွေရယ်၊ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြပြီးပြီလဲ ပြန်ငဲ့ကြည့်ပါဦး ၊
သူရဲကောင်းတွေ ၊ လူဆိုးကြီးတွေရယ်၊ ခင်ဗျားတို့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြလဲ ကြည့်ပါရစေဦး ..
မတ်မတ်ရပ်တည်နိုင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ပြိုလဲရှုံးနိမ့်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီနေရာမှာ ဖြစ်နေတာတွေ ကျွန်တော်သိပါတယ် ..
ဒီတောင်ကြားဒေသလေးမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအရသာကိုခံစားရစေချင်ပြီ ....
ဒါတွေကတော့ သူရဲကောင်းတွေ၊ လူဆိုးကြီးတွေနဲ့ ဖြစ်ပျက်ကြုံတွေ့ရသမျှ ကိစ္စတွေချည်းပါပဲ ..
ကျွန်တော့်ရဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက် မွေးမြူပျိုးထောင်ခဲ့ရပြန်ပြီ၊ သူတို့ ချက်ချင်းပဲ ရှင်သန်ကြီးပြင်းလာတယ်လို့ ခင်ဗျားထင်နေတာလား ..
နှစ်တွေအများကြီးပဲ .. သူတို့ရဲ့ဦးခေါင်းကနေ ခြေချောင်းလေးတွေအထိ နှေးနှေးကွေးကွေး လူလားမြောက်လာရတာ၊
သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာေ၇း၊ ပညာရေးအကုန်လုံးပါပဲ ..တုန့်နှေးနှေး စတင်လာခဲ့ကြတာပါ ..
ကျွန်တော် ဒီမြို့လေးမှာ နေလာခဲ့တာ သိပ်ကိုကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ ..
ကျွန်တော့်ဆီ တိုးဝင်လာတဲ့ အရာတွေပြည့်သိပ်လို့ နေသားတကျရှိနေခဲ့ပြီ ..
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အရာတွေ နဲ့လဲ အလိုက်သင့် စီးမြောနိုင်ခဲ့ပြီ ..
နေသာတဲ့နေတစ်နေ့မှာလဲ ဖြာကျနေတဲ့နေရောင်စူးစူးအရိပ်အငွေ့တွေ ရှုရှိုက်ရင်း 'ငါ အဆင်ပြေသားပဲ'လို့ ပြောရပါဦးမည်..
သူရဲကောင်းတွေ ၊ လူဆိုးကြီးတွေရယ်၊ ခင်ဗျားတို့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြလဲ ကြည့်ပါရစေဦး ......
Posted by PhyoPhyo at Sunday, November 08, 2009 Labels: ကဗျာဆရာတစ်ဦးနဲ့ နာရီချိန်သီး, ဘာသာပြန်သီချင်း
လှိုင်းသစ်မဂ္ဂဇင်းမှာပါခဲ့တဲ့ စာမူပါ၊ စာအသစ်ရေးထားတာမရှိတာနဲ့ပဲ ဟိုကဒီက အဟောင်းတွေဆွဲထုတ်တင်လိုက်ရပါတယ်၊ ကလောင်နာမည်က မဥ္ဖှူရီပါ
ကဗျာဆရာတစ်ဦးရဲ့ ဘဝချိန်သီး တစ်တစ်တောက်တောက် လှုပ်ရှားနေပုံကို မြိုင်ဆိုင်လှတဲ့ သံစုံတူရိယာတွေနဲ့ ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ ရေးစပ်သီဆိုထားတဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ်ပါ။ ဖင်လန်နိုင်ငံသား အဖွဲ့သားငါးဦးပါဝင်တဲ့ သံစုံမက်တယ်အဖွဲ့ Nightwish ရဲ့ အဲဒီ The Poet and the Pendulum သီချင်းဟာ မှော်ဝင်ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတစ်ကားကြည့်နေရသလို သံစဉ် အတက်အကျနဲ့အတူ၊ တဒုတ်ဒုတ် နှလုံးခုန်လှုပ်သံ၊ ကျီးအာသံတွေက ဂီတချစ်သူတွေကို ဘယ်လိုမှ လက်မလွှတ်နိုင်အောင် ဖမ်းစားခဲ့တဲ့ သီချင်းလဲဖြစ်တယ်။ သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Nightwish ရဲ့ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Dark Passion Playအယ်လ်ဘမ်ထဲက ပထမဆုံး သီချင်းပါ။ Dark Passion Play အယ်လ်ဘမ်ကို ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ ခုနှစ်မှာ အသံဖမ်းခဲ့ပြီး Record Label "Spinefarm Records"နဲ့ထုတ်ခဲ့တယ်။ ထူးခြားတာက Nightwish ဂီတသမိုင်းမှာ ၁၄မိနစ်ကြာခဲ့တဲ့ အရှည်ဆုံးသီချင်းဖြစ်တယ်။ The Poet and the Pendulum သီချင်းကို ရေးသားခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကီးဘုတ်သမား တူရိုမာစ့်ဟိုလိုပိုင်နမ် က ဒီသီချင်းကို ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် သူအလွန်အမင်းပျော်ရွှင်ခဲ့ပြီး အကြိုက်ဆုံး Nightwish သီချင်းတစ်ပုဒ် အဖြစ် သူ အမြဲခံစားမိနေတော့မှာ သေချာတယ်လို့ အယ်လ်ဘမ်မထွက်ခင်မှာ တရားဝင်ကြေငြာခဲ့ဖူးပါတယ်။ Nightwish ဂီတအဖွဲ့ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အဖွဲ့သားတွေက ဖင်လန်နိုင်ငံ ကီတီးမြို့လေးကပါ။ Nightwish တွေ ဖန်တီးတဲ့ဂီတမျိုးက မက်တယ်လ်ဂီတကိုပဲ သံစုံတူရိယာတွေနဲ့ classic တေးသွားတွေ ပေါင်းထည့်ထားတဲ့ Symphonic power metal ဂီတအမျိုးအစား ဖြစ်တယ်။
တူရိုမာစ့် က ဒီသီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခုလိုပြောခဲ့တယ်။
The Poet and the Pendulum ဟာ လှပလွန်းတဲ့စာသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ် .. မော်ကွန်းတင်လောက်တဲ့ စွမ်းအားပြင်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ဘယ်လိုတဲ့။ မဟုတ်ရပါဘူး။ ကျွန်တော်က ကိုယ့်ဘာသာတံဆိပ်တပ် ချီးမြှင့်မြောက်စားနေဖို့ဝါသနာပါတဲ့သူမှ မဟုတ်တာ။ ထပ်ခါထပ်ခါ သီဆိုရတဲ့ စာသားတစ်ချို့ကျွန်တော်ရွတ်ပြမယ်.. ခင်ဗျား လိုက်ဆိုကြည့်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေက ခင်ဗျားနှုတ်က ဒလဟောထွက်ကျလာမှာ အသေအချာပဲ..
ကဲ ကျွန်တော်တော့ စ.. ရွတ်ပါပြီ။
'ပြေး၊ အဝေးကိုပြေး၊ ပျံသန်းပြီး ထွက်ပြေး၊
အိမ်မက်မက်နေသူတွေကို ယောင်ဝါးဝါးလမ်းကြောင်းမှားတွေဆီက ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ .. ငါ .. ဦးဆောင်ပေးချင်ရဲ့ ..
ငါ မငိုနိုင်ပါဘူး .. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ငါမှီတွယ်ရမဲ့ပုခုံးပိုင်ရှင်တွေက ပိုလို့ ပိုလို့ သည်းသည်းထန်ထန်ငိုကြွေးနေကြတာကိုး ..
ငါ မသေနိုင်ပါဘူး .. အေးစက်တဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးအတွက်.. ငါက... အဖြည့်ခံ မိန်းမလှတစ်ဦးဖြစ်နေသေးတယ်လေ .. '
တူရိုမာစ့် သတင်းပေးခဲ့တဲ့ 'The Poet and the Pendulum'ရဲ့ စာသားတွေက တကယ်ပဲ လှပလွန်းနေခဲ့ပါတယ်။
သီချင်းချစ်သူတွေအားလုံး မြည်းစမ်းကြည့်နိုင်ဖို့ 'The Poet and the Pendulum' စာသားတွေအားလုံးခံစားကြည်းတဲ့အခါ ....
သီချင်းရေးသူဟာ သေဆုံးခဲ့ပြီ ..
ဓါးသွားတွေက သူ့အပေါ်မှာအုပ်မိုးလို့ ..
အဖြူရောင်ကုန်းမြေတွေဆီ သူ့ကိုဆောင်ယူနေကြပြီ ..
ကိုယ်ချင်းစာနာမှုတွေရှိရာဆီ .. အပြစ်ကင်းစင် ကြည်လင်မှုတွေရှိရာဆီ ..
အိမ်မက်မက်သူနဲ့ ဝိုင်အရက် အစပ်အဟပ်မိနေချိန်မှာ ..
ကဗျာဆရာကတော့ ကာရန်တွေလွဲနေဆဲ ..
စာရေးတဲ့မုဆိုးမတစ်ယောက်ကတော့ဖြင့် ငရဲသံကွင်းကြိုးတွေကြောင့် အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာဖြစ်ရရှာတယ် ..
နောက်ဆုံးဖြည့်လိုက်တဲ့ စာတစ်ကြောင်းက သီချင်းအိုတစ်ပုဒ်နဲ့.. တူနေဆဲပါပဲ ..
အို ခရစ်တော်.. ဘယ်လိုမုန်းရမလဲ.. ဘာတွေဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ရမလဲ ..
အိမ်အရောက် ပို့ပေးလှည့်ပါ ..
ပြေး၊ အဝေးကိုပြေး၊ ပျံသန်းပြီး ထွက်ပြေး ..
အိမ်မက်မက်နေသူတွေကို ယောင်ဝါးဝါးလမ်းကြောင်းမှားတွေဆီက ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ .. ကျွန်မ .. ဦးဆောင်ပေးချင်ရဲ့ ..
ကျွန်မ မငိုနိုင်ပါဘူး .. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မမှီတွယ်ရမဲ့ပုခုံးပိုင်ရှင်တွေက ပိုလို့ပိုလို့ သည်းသည်းထန်ထန်ငိုကြွေးနေကြတာကိုး ..
ကျွန်မ မသေနိုင်ပါဘူး .. အေးစက်တဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးအတွက်.. ကျွန်မက... အဖြည့်ခံ မိန်းမလှတစ်ဦးဖြစ်နေသေးတယ်လေ ..
ကျွန်မကို ခွင့်လွှတ်ပါ ..
ကျွန်မမှာ မျက်နှာနှစ်ခုရှိနေလေရဲ့ ..
တစ်ခုက ကမ္ဘာကြီးအတွက် ..
နောက်မျက်နှာတစ်ခုက ဘုရားသခင်အတွက် ..
ကျွန်မကို ကယ်ဆယ်ပါ ..
ကျွန်မရဲ့အိမ်က အဲဒီမှာရှိနေတယ် ..
မြက်ခင်းတွေကများ စိမ်းလန်းနေလိုက်တာ နတ်ဘုံနတ်နန်းတမျှပဲ ..
စွန့်စားခန်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့နေ့တွေရယ် .. အမြဲပြုံးနေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုရယ် ..
ကျေးဇူးပြုပြီး စကားတွေသိပ်များများမပြောပါနဲ့လား ..
နဂိုကရှုပ်ထွေးကျပ်တည်းနေတဲ့ ဦးခေါင်းထဲ အတွေးတွေ ပိုပိုရောက်လာနေလွန်းလို့ပါ ..
ချီးမွန်းထောပနာပြုသံတွေလဲ အများကြီးမလုပ်ပါနဲ့ ..
တကြိမ်ပဲပြောပြပေးပါ .. ကျွန်မရဲ့နှလုံးသားက မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့ ..
အိမ်အရောက် ပို့ပေးလှည့်ပါ ..
အိမ်မက်မက်နေသူတွေကို ယောင်ဝါးဝါးလမ်းကြောင်းမှားတွေဆီက ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ .. ကျွန်မ .. ဦးဆောင်ပေးချင်ရဲ့ ..
ကျွန်မ မငိုနိုင်ပါဘူး .. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မမှီတွယ်ရမဲ့ပုခုံးပိုင်ရှင်တွေက ပိုလို့ပိုလို့ သည်းသည်းထန်ထန်ငိုကြွေးနေကြတာကိုး .. ကျွန်မ မသေနိုင်ပါဘူး .. အေးစက်တဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးအတွက် ကျွန်မက... အဖြည့်ခံ မိန်းမလှတစ်ဦးဖြစ်နေသေးတယ်လေ ..
ကျွန်မ မငိုနိုင်ပါဘူး .. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မမှီတွယ်ရမဲ့ပုခုံးပိုင်ရှင်တွေက ပိုလို့ပိုလို့ သည်းသည်းထန်ထန်ငိုကြွေးနေကြတာကိုး ..
ကျွန်မရဲ့ ရှုမျှော်ခင်းဟာ ..
အစိမ်းရောင်၊ အပြာရောင်လင်းလက်နေတဲ့ရေတံခွန်နဲ့အတူ ..
အောက်ခြေကပေါ်ထွက်လာတဲ့ အလှတရားတို့နဲ့အတူ ..
အမြဲ လွတ်လပ်စွာ .. တလက်လက်တောက်ပလို့.
ကျွန်မကို အဲဒီအပြာရောင်အလင်းတောက်တောက်အောက် .. နာကျင်မှုတွေအောက် .. မိုးရေတွေအောက် အားကုန်ပို့ဆောင်ပေးပါ ..
ကလေးတစ်ယောက်အတွက် အိပ်ရာဝင်အနမ်း အချိန်မှီပေးသလို .. ကျွန်မရဲ့ ချော့မြူတဲ့သီချင်းက ဓါးသွားထက်ရှရှတွေကို ယိမ်းယိုင်စေမယ် ..
ဖျော့တော့တော့ လရဲ့ အလင်း မပီမပြင် .. ဖြာကျနေတဲ့ ကမ်းခြေမှာ ကျွန်မတို့ အတူထိုင်ခဲ့ကြတယ် .. အတူ မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ် ..
ဘယ်သူ့ရဲ့အလင်းပြောက်ကများ ရှင့်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါလိမ့် .. ရှင့်ရဲ့အားလုံးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီ ..
ကျွန်မ စိတ်မကောင်းပါဘူး .. တကယ်ကို စိတ်မကောင်းပါဘူး ..
မတရားမှုတွေက ထပ်ခါ .. ထပ်ခါ ကျူးလွန်ခဲ့ပီးပြီ ..
ကျွန်မသိပါတယ် .. ကျွန်မသေရင် အနားမှာတစ်ယောက်မှမရှိ .. ကျွန်မ သေသွားရလိမ့်မယ်လို့ပေါ့ ..
ဒါပေမဲ့ .. ချစ်ခဲ့ပါတယ်..
ရှင် က သေနတ်သံတွေ ကြားရဖို့ လုံလုံလောက်လောက်ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ် ..
ညတိုင်း စူးစူးဝါးဝါးအော်ဟစ်ရင်း ရှင့်ဘာသာ ရှာဖွေဖို့ လုံလုံလောက်လောက်ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ် ..
ရှင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ရှင့်ကို သစ္စာဖောက်ကြတာ မြင်တွေ့ရဖို့ လုံလုံလောက်လောက်ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ် ..
နှစ်တွေအကြာပြီးပဲ ယဇ်ပလ္လင်ထက်မှာ ကျွန်မ .. သားရေပြားနဲ့တုပ်နှောင်ခံခဲ့ရတယ် ..
အခုတော့ ၃မိနစ်ပဲ အချိန်ရတော့တယ် .. ကိုင်း .. စပြီးရေတွက်တော့မယ် ..
ကျွန်မ အမြဲတမ်းတနေခဲ့ရတဲ့ သေခြင်းတရားကို ဒီရေတွေကဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ဖို့ ဆန္ဒပြုမိပါတယ် ..
ခရစ်တော်ရဲ့ ညာဘက်က ဒုတိယမြောက် ဓါးပြက ကလေးငယ်ကိုသတ်ဖြတ်နေပြီ ..
ကမ္ဘာကြီးက ဒီနေ့ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းနေပြီ ..
ကျီးကန်းတွေက ပုပ်သိုးနေတဲ့ကဗျာဆရာကို ထိုးဆိတ်ဖဲ့ရွဲ့ရင်း ပွဲတော်တည်ခင်းနေကြပြီ ..
လူတိုင်းပဲ သူတို့ကိုယ်ပိုင်အရာတွေအဆုံးမှာ မြုပ်နှံပစ်ရမှာပါပဲ ..
ကျောက်သားလို နှလုံးသားကို မြှပ်နှံဖို့ ထုပ်ပိုးစရာလဲ လိုမှမလိုတော့တာပဲ ..
ခု သူ့ရဲ့ အိမ်က ငရဲမှာ .. သူ့ကိုငရဲပြည်က ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဧည့်ခံနေကြပြီလေ ..
ခေါင်းလောင်းသံတွေကသူ့ကိုသတ်ဖြတ်နေပြီ .. သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမှာ ခေါင်းလောင်းသံတွေနဲ့နှုတ်ဆက်နေကြပြီ ..
နံနက်မိုးသောက်တဲ့အခါ .. ညစ်ထေးတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပဲ လှည့်ပတ်ကစားရင်းကျန်ရစ်တယ် ..
ရှင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက အရှက်ကင်းမဲ့လောက်အောင်ပဲ ဟန်လုပ်သရုပ်ဆောင်တာလေးတောင် မပီပြင်ခဲ့ကြပါဘူး ..
ရှင့်ရဲ့ အခေါင်းကို တံတွေးနဲ့ ပစ်ကနဲထွေးကြတယ် ..
အိမ်မက်မက်နေသူတွေကို ယောင်ဝါးဝါးလမ်းကြောင်းမှားတွေဆီက ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ .. ကျွန်မ .. ဦးဆောင်ပေးချင်ရဲ့
ကျွန်မ မသေနိုင်ပါဘူး .. အေးစက်တဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးအတွက် .. ကျွန်မက... အဖြည့်ခံ မိန်းမလှတစ်ဦးဖြစ်နေသေးတယ်လေ ..
တစ်ခုက ကမ္ဘာကြီးအတွက် ..
'ဒီနေ့ ကျွန်မတို့အရှင်သခင်ရဲ့ ၂ဝဝ၅ခုနှစ် .. တူရိုမာစ့်က ကမ္ဘာကြီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ အားလုံးကိုသတိပေးလိုက်ပြီ .. လှပတဲ့နေ့တစ်နေ့စီမှာ သူ .. ငိုကြွေးတာတွေ ရပ်တန့်လိုက်ပြီ .. သူရေးလိုက်တဲ့သီချင်းက သိပ်ရှည်လျားတယ် .. ငြိမ်ငြိမ်ဆိတ်ဆိတ်လဲမရှိဘူး .. သူ .. ဗလာဟင်းလင်းဖြစ်မှုနဲ့ သေခြင်းတရားကို တွေ့လိုက်ပြီ ..
သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာ အပြုံးတစ်ခုဆင်မြန်းလို့ .. ဘောပင်တစ်ချောင်းကိုင်စွဲလို့ .. ဖျက်ရာပြင်ရာတွေဗရပွပါနေတဲ့စာရွက် ၁ဝဝဝ နဲ့အတူ ..
ကလေးငယ် .. စိတ်အေးချမ်းသာနားနေပါ ..
အခု အိမ်ကိုရောက်လှည့်ပါပြီ ..
အိုး .. ဘယ်အချိန်ထဲက .. မင်း .. အေးစက်တုန်ယင်နေခဲ့ပါလိမ့် ..
ဓါးသွားတွေ တဖြည်းဖြည်းလျော့ပါးပျောက်ဆုံးကုန်ပါလိမ့်မယ် ..
မင်းလိုနေသမျှအရာအားလုံးက အချစ်ကိုခံစားမိဖို့ပါ ..
အလှအပတရားကိုရှာဖွေပါ .. မင်းရဲ့ကမ်းခြေကို ရှာပါ ..
အရာအားလုံးကို ထိမ်းသိမ်းဖို့ကြိုးစားပါ .. ထပ်ပြီး .. မနာကျင်ပါစေနဲ့တော့ ..
မင်းဆီမှာ အဲဒီလို ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေရှိနေပါပြီ ..
ငါ မင်းကို အမြဲချစ်လို့နေဦးမှာပါကွယ်။ ။